Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya.
MUQDISHO, Soomaaliya – Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in ay ka xun tahay diyaaradii maanta ku burburtay garoonka diyaaradaha Beledwayne, xarunta gobolka Hiiraan ee bartamaha dalka.
"Inkasta oo burburka diyaarada iyo muwaacinada ay tahay nasiib darro, hadana waxaan ku faraxsanahay in aysan jirin cid dhulka joogtay oo wax ku noqotay," ayay safaaradda ku yiri bayaan uu arkay Garowe Online.
Mas'uuliyiinta sidda deg-deg ah uga jawaabay shilka ayay uga mahadcelisay in ay isla markiiba gurmad la gaareen howlwadeenadii la socday.
Burburka diyaaradda oo ka dhacay dhabaha caga-dhigashada ayaa warar horudhac ah ay sheegayaan in uu yimid markii jaay uu ku dhacay mid kamid ah baalayasha diyaaradda, sidaas ay uga baxday dhabaha.
Warbixino kale ayaa tilmaamaya in ay taraaraxday diyaaradda maadaama garoonka oo jaay uu xalay ku da'ay roob xooggan.
Mas'uuliyiin kale ayaa rumeysan in hagayaasha garoonka oo jiho qaldan siiyey duuliyaha oo ku cusbaa madaarka uu shilka ka dhashay.
Duulimaadkan oo ka yimid Jabuuti ayaa sidday shixnad gargaar ah oo loo wadday shacabka Jabuuti. Sidoo kale, waxaa saarnaa shixnad kale oo loo wadday ciidamada AMISOM. Diyaarada waxay u kiresneydka UN-ka.
Warka qoraalka ah ee safaaradda oo tafaasiil badan aan lagu bixin ayaa waxaa lagu sheegay in gargaarka uu ka yimid Mareykanka uuna sii wadi doono taageerada shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda federaalka.
Diyaaradda burburtay oo ay lahayd shirkad laga leeyahay Kenya laguna magacaabo Bluebird Aviation waxaa saarnaa saddex shaqaale ah – duuliyaha iyo laba caawiye ah – dhamaantoodana waa la xaqiijiyey badqabkooda.
Dameer lagu eedeeyay shilkii diyaaradeed ee ka dhacay Beledwayne
Afrika 15.07.2020. 09:20
Diyaaradan oo nooca xamuulka ah waxaa lahayd shirkad fadhigeedu yahay Nairobi, caasimada Kenya.
Mareykanka oo DF ku cadaadinaya in ay ka laabato dacwadda badda
Afrika 22.10.2019. 14:36
Mareykanka oo laga dalbaday in uu diido dalab ay Kenya u dirtay UN-ka
Soomaliya 10.08.2019. 12:06